कैलाशको कुटी: Old is Gold
Posted by कैलाश at 1:20 PM
तपाईको लेख त निकै जाती .... रहर लाग्दो ।
आज पुच्छ्रे टिप्पणी थपिएछ र नै नत्र ता त्यो हस्याङ्ग फस्याङ्ग सहितको दौडधूप तपाईंकै होला भन्ठानेथें । बाहिरतिर जे चाहिने हामीकहाँ त्यही नपाईने हैन यो समय कस्तो बेईमान बन्दै गैरहेको हँ ?
अर्काको अनुभवलाई पनि यति जिबन्त ढंगले, आफ्नै हो कि भनेजस्तो हुनेगरी लेख्नुभएको छ, गज्जब लेख्नुभएको छ। त्यो पूच्छ्रे टिप्पणीमा आँखा नपुगुञ्जेल त कैलाशजी यसरी बेपत्ता हुनुको रहस्य यहि रहेछ भन्ने परेको मलाई पनि!
हाम्रो देस पनि अचम्मको छ। एकातीर बत्ती नभएर 'old is gold' भनेर टुकी र लालटेन खोज्नु पर्छ भने अर्कोतीर रोलवाला क्यामेराले तस्विर खीच्न पनि खोजि खोजि हिड्नु पर्छ ।
धेरैदिन पछी आउनुभयो तर रमाईलो प्रसंगका साथ ।
मलाई त आफ्नै कथा जस्तै जस्तै लाग्यो । ढाँटेको हो कि क्या हो साथीको कथा भनेर !!! पढ्न चैँ एकदमै रमाइलो लाग्यो !!
katha nikai gahkilo ani jeewant cha.